Industrial Rubber Air Spring / Air Tire China Manufacturer
Tsanangudzo:Industrial Rubber Air Spring,Industrial Rubber Spring,Air Tire yePepa Mill
Home > Products > Pepa Muchina Spare Zvikamu > Industrial Rubber Air Spring / Air Tire
Muenzaniso Nha.: HT-012
Max Diamater: 160-680mm
Flange Outer Diameter: 120-640mm
Number Of Flexures: 1-3
Kubudirira: 10000 pieces/year
Matsime emhepo anowanzozivikanwa se pneumatic matairi, corrugated pneumatic matairi, airbags, etc. Iyo chaiyo-yakagadzirirwa rubhaira fiber corrugated chubhu. Izvo hazvipe simba kana rutsigiro mutoro pachako, asi zvinoshandisa rakamanikidzwa mweya kuzadza mukati mukati memhepo compressor kuti uwane simba. Chinjana uye elastic mugumo. Zvinoenderana nezvinodiwa zvekurohwa, chitubu chemhepo chinowanzogadzirirwa kuve 1-3, uye chinogonawo kugadzirwa uye kugadzirwa kuve 4 kana anopfuura mashanu kana zvichidikanwa. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, mhepo yemhepo inokwanisawo kukwidziridzwa.
Iyo inonyanya kushandiswa muindasitiri yemuchina wepapermaking. Iyo inoshandiswa pakugadzirisa sitiroko uye kushushikana kudzora kwema calibrators, makarenda, mashini, masipikicha, zvidzitiro uye zvimwe zvikamu. Uye zvakare, inoshandiswawo mukuvaka, makemikari, uye maindasitiri emuchina. Kusekesa, kuzvitsaura kwekuzvitsaura uye kudzora sitiroko
Number of flexur
Matsime emhepo ane asina-mutsara maitiro, uye kusindimara kwavo kunochinja nemutoro, saka kudzikama kwavo kwechimiro kungangoita kusachinjika pasi pe chero mutoro, zvekuti chipenga chemhepo chinenge chine hunhu hunogara chichiitika, uye chichigona kutora yakakwirira frequency vibrate uye kurira kusimbisa. Iyo inogona kutakura axial mutoro uye radial mutoro panguva imwe chete. Kuburikidza nekudzvanywa kwemukati kudzvanywa, inogona zvakare kuwana akasiyana kuberekwa masimba. Naizvozvo, iyo inogona kuiswa kune akasiyana emitoro inodikanwa.
Munguva yekushanda kunobudirira kwemhepo chitubu, kuomarara, kukwirira, huwandu hwekati, uye kutakura simba remhepo chitubu kunogadziriswa nekuwedzera kana kuderera kwekumanikidza. Panguva imwecheteyo, kuomarara kwayo, kukwirira kwayo, huwandu hwayo hwemukati, uye huremu hwayo huchachinja mushe uye nguva nenguva nekuwedzera nekudzikira kwemutoro, zvobva zvaita kuti huchinjike kutapurirana kwekutakura simba, kugadzirisa kwakasimba kwekurova, uye kudedera kukura uye kudedera mutoro. Kunyatsoshanda kudzora. Kamuri yemhepo inokwanisawo kuwedzerwa pakugadzirisa kwega.
Iyo ine yakadzika yekumisikidza yekumusoro uye yakaoma kwazvo komputa.
Kunyangwe iine mutoro wakakura uye yakakura sitiroko, zvinokwanisika kugadzira kompakiti yejekiseni ine yakaderera yekumisikidza urefu.
Kutiza, hapana kuchengetedza kunodiwa
Nekuti hapana chikamu chinotenderera, rehweta risingade kukwidziridza uye nekugadzirisa rinogona kuwanikwa.
Industrial Rubber Air Spring Industrial Rubber Spring Air Tire yePepa Mill Industrial Rubber Kuendesa Belt Industrial Roller YeAluminium Industrial Felt Roller Sleeve Industrial Felt Industrial Felt Belt